Ngazi kanjani ukuthi ngihlangane ne-True Self yami noma i-Ego? - Mytika Speak
Lapho I-Logic Nemizwa Kuhlangana
Amalangabi Amabili Nothando Olungcwele
I-Ego & The Physical
Ibhalansi kanye neGrey
Amandla Omhlaba Nokubengezela
Imizwa, okhiye nokubonakaliswa
Karma, Ukuphindukuzalwa kanye nezandiso
Imibono, iziphazamiso nezimpawu
Yikuphi okunye ukuzivocavoca kwamawele amabili asanda kuhlangana?
Ingabe amalangabi amawele angaba ubulili obufanayo?
Yini engaphinde ihlangane ngamawele amalangabi?
Ngazi kanjani ukuthi amalangabi amawele akhona ngempela?
Ikhaya / I-Universe / Ngazi kanjani ukuthi ngihlangane ne-True Self yami noma i-Ego?
Ngazi kanjani ukuthi ngihlangane ne-True Self yami noma i-Ego?
Mashi 30, 2021
Lapho umuntu ehlangane nabo Okwangempela, bathola umuzwa wokulondeka okufudumele. Kuzwakala njengokugcwalisa isikhala nokuthola okuthile umuntu abekade ekufuna. Lokhu kuvame ukuhambisana ne-flutter, njengezimpiko zovemvane ezisheshayo, esifubeni. Imvamisa abantu bazizwa belula futhi benomuzwa wokuvuka ngaphakathi (njengokudonselwa phezulu) lapho behlangane ne-True Self.
Lapho umuntu ehlangane nabo ukuzazisa, bazizwa benomqondo wokuthi bayasinda futhi bayasindwa (njengokucindezelwa phansi).
Kokubili i-True Self ne-Ego kuyadingeka ekubhekaneni nempilo. Ngobudlelwano babo be-Push / donsa energy, bavimbela umuntu ekubeni ngamandla ahlanzekile noma ngokomzimba. Esikhundleni salokho, ukuba khona, njengoba izakhamuzi zomhlaba zikwazi, zilele ezindaweni ezahlukahlukene phakathi kwalokhu okubili; ukuhlanganisa ngokuphelele okungokomoya nokwenyama ukuthola ukuzinza. Imizwa nemibono yomuntu inquma ukuthi basondele ngakuphi uhlangothi kulwazi lwabo lwamanje.
thola i-True Self
Like Iyalayisha ...
Amathegiukuqaphela ukuzazisa ukhona ukukhula komuntu siqu izinkondlo izifundo ezingokomoya ingokomoya Okwangempela
Ngisenza kanjani isikhathi sihambe ngokushesha noma sihambe kancane?
Uhamba kanjani phakathi kobukhulu?
Yini inhloso yobukhulu obuhlukile?
Ingabe Izulu Lingaba Emhlabeni?
Buyini ubudlelwane phakathi kwendawo yonke noMhlaba / iNyanga / iLanga?
Ingabe isikhathi nendawo kukhona?
Chofoza lapha ukuthumela amazwana
Yabelana ngombono wakho	Khansela impendulo
Ikusasa, okwedlule nokwamanje kusebenzisana kanjani?
I-Ego ne-The Physical
Cela Iseluleko kuMytika
Iba ngowokuqala ukwazi lapho sithumela izimpendulo ezintsha zemibuzo yakho engokomoya.
Ikheli lakho le-e-email
Mytika Speak kuyinsiza yalabo ababhekana nokuvuka ngokomoya, ukuhlangana kwamawele amabili, bafunde ukubonisa, ukuthola i-True Self yabo, nezinye izihloko eziningi ngokunikeza izimpendulo zemibuzo engokomoya.
Kungabonakala kanjani i-Extreme Ego?
Ngiyeka kanjani ukukhathazeka ezixukwini ezinkulu?
ukuqaphela ukuqonda uthando lwaphezulu ukuzazisa kakhulu uNkulunkulu haiku Ugqozi izifundo umcimbi i-micropoetry ukukhula komuntu siqu inkondlo izinkondlo isifinyezo okungokomoya ingokomoya izifundo ezingokomoya Okwangempela Amalangabi Amabili
I-copyright © 2022 Mytika Speak. Wonke Amalungelo Agodliwe. Inqubomgomo yobumfihlo futhi Imigomo Yokusebenzisa
%d Blogger like lokhu: